5 Explore ရန်ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်မြစ်ချောင်းများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5Explore ရန်ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်မြစ်ချောင်းများ
မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ်, မီးရထားခရီးသွားလာဂျာမဏီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, မီးရထားခရီးသွားလာဟန်ဂေရီ, မီးရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား
အများကြီးရှိပါတယ်မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Modes သာ ရထားထက် သာ. ကောင်း၏, သို့သော်မြစ်ရုဇ်တော်တော်လေးနီးစပ်လာ! ဒါဟာဇိမ်ခံနှင့်ဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပါသည် ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လမ်း ဥရောပ၏သာယာကြည်နူးစရာ, မြင်နေမြို့ကြီးများ, ဒေသများ, အသစ်တစ်ခုရှုထောင့်ကနေနိုင်ငံများ. သငျသညျစူးစမ်းလေ့လာလို့ရပါတယ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများ ကြောင်းမဟုတ်ရင်တစ်အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်ကနေလွဲချော်စေခြင်းငှါ. ဤမျှလောက်များစွာသောလူများကရှေးခယျြအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ သာယာလှပလမ်းကြောင်း အဆိုပါကြည့်ဖို့5Explore ရန်ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်မြစ်ချောင်းများ!
1 ၏5ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်မြစ်ချောင်းများ: ညု
အရှည်: 1,783 မိုင် / 2,870ကီလိုမီတာ
ခရီးစဉ်: ဂျာမနီ – ပင်လယ်နက်ဖို့က Black Forest
သငျသညျသမိုငျးကိုခံစားလျှင်ညုမြစ်ခရုဇ်ကိုယူ, လက်ရာမြောက်သောအစားအစာ, နှင့် မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံများ. အမ်စတာဒမ်၌ခေတ်မီမြို့မှတဆင့်ခရီးသွားခြင်း အနောက်ဥရောပ ဖြည်းဖြည်းချင်းအရှေ့ဥရောပသွားတာသို့ဆငျးသသောညုအပေါ် သမိုင်းဝင်အထင်ကရအဆောက်အ, ထိုကဲ့သို့သော Salzburg အဖြစ် (ဂီတ၏မြို့), သို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအရက်ဆိုင်သွားရောက်ချွတ်ခုန် ခေတ်မှီဘူဒါပက်. ဥရောပမြစ် cruises ဒီစုဆောင်းမှုအသစ်အတှေ့အကွုံမြားနှငျ့ပွညျ့စုံတစ် dreamlike အာကာသသို့သင်ပယ်ရှင်းမည်, ရူထောင့်များ, အသံ, smells and gastronomic encounters.
မြူးနစ် Salzburg မှရထား
Salzburg Passau မှရထား
2 ၏5ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်မြစ်ချောင်းများ: Rhone
အရှည်: 505 မိုင် / 813ကီလိုမီတာ
ခရီးစဉ်: ဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်း မြေထဲပင်လယ်
Rhone မြစ် တစ်သမိုင်းဝင်မြစ်ဖြစ်ပါသည် ဆွစ်ဇာလန် နှင့် ပြင်သစ် နှင့်အထင်ရှားဆုံးရေလမ်းတဦး ဥရောပ. ဒါဟာအဆိုပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရငျးတှငျအံ့ဩစရာမရှိဖြစ်ပါတယ်5Most Beautiful rivers in Europe to explore.
ဒါဟာတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတစ်ခုတည်းသောအဓိကမြစ်ဖြစ်ပါသည် မြေထဲပင်လယ် နှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် Alpine ဖြစ်ပါသည်အပေါ်ယူထားပါတယ်. ဤသည်က၎င်း၏မြောက်ပိုင်းအိမ်နီးချင်းကနေအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောစေသည်, အဆိုပါရိုင်း, ကဆွစ်ဇာလန်အရွက်တဲ့အခါမှာနောက်ကွယ်ကသူ့ရဲ့ Alpine ဝိသေသလက္ခဏာများအပေါငျးတို့သအရွက်အရာ. အဆိုပါ Rhone ၏သာယာလှပခြင်းနှင့်မကြာခဏရိုင်းသင်တန်း, အထဲတွင်စီးသောရေကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, ထိုသို့ညျလူသားတို့ကအသုံးပြုခဲ့ပြီးလမ်းကိုလူအပေါင်းတို့သည်အားဖြင့်ပုံဖော်ထားသည် တောင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, လက်ျာဘက်ဆင်းမြစ်ပါးစပ်မှ, တစ်ဦး Alpine ရေခဲမြစ်အတွက် Rhone marking အနည်မြေထဲပင်လယ်၏ပူနွေးသောရေသို့သယ်ဆောင်နေကြဘယ်မှာ.
ရထား Chur ဖို့ဇူးရစ်
ရထား Chur မှဂျီနီဗာ
မီလန် Tirano မှရထား
Bergamo Tirano မှရထား
3 ၏5ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်မြစ်ချောင်းများ: အဓိက
အရှည်: 326 မိုင် / 525ကီလိုမီတာ
ခရီးစဉ်: Mainz မှ Kulmbach, ဂျာမနီ
အဆိုပါပင်မမြစ်ဖြစ်ပါသည် 327 မိုင်ရှည်လျားပြီးအရှည်ဆုံးမြစ်အတွင်းလုံးဝတည်ရှိသည် ဂျာမနီ. အနောက်ဘက်မှအရှေ့ဘက်ကနေစီးဆင်း, ပင်မ Mainz မှာရိုင်းမြစ်ပူးပေါင်းမည်, ဂျာမနီ. အဆိုပါပင်မမြစ်ဂျာမဏီ၏အထက်ပိုင်း Franconia ဒေသတွင်စတင်; သို့သော်, မြစ်သာတို့အကြားသွားလာစဉ်းစားသည် Bamberg နှင့် Mainz.
တွင် 1992 အဆိုပါ main-ညုတူးမြောင်း ဖွင့်လှစ်, သောပင်မနှင့်အညုမြစ်ချောင်းများကိုဆက်သွယ်. အဆိုပါတူးမြောင်း Bamberg အတွက်အစပြုနှင့် Kelheim အတွက်ညုမြစ်နှင့်တွေ့ဆုံ, ဂျာမနီ. ယခုဤနှစ်ခုလုံးကိုခရီးသည်တင်သင်္ဘောများနှင့်သေးငယ်စီးပွားဖြစ်ရေယာဉ်များသည်အရှေ့ဘက်မှအနောက်ဘက်တွင်မြောက်ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်နက်အကြားသွားလာခွင့်ပြုမယ့်အဓိကရေလမ်းစဉ်းစားသည်.
Mainz ရထားမှ Cologne
Mainz ရထားမှ Frankfurt
4 ၏5ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်မြစ်ချောင်းများ: သူ၏
အရှည်: 485 မိုင် / 780ကီလိုမီတာ
ခရီးစဉ်: Dijon ၏အနောက်မြောက်, ယင်းမှပြင်သစ် အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြား သည် Le Havre မှ
မြို့အတော်များများကသူတို့ကိုသတ်မှတ်ဖေါ်ပြတဲ့အင်္ဂါရပ်များ, သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုသတ်မှတ်ပါတယ်, နှင့်မြို့ကြီးများနှလုံးမှတဆင့် run သောသွေးခုန်နှုန်းအဖြစ်ပြုမူ. ပဲရစ်အတွက် Seine မြစ်မြစ် Thames လန်ဒန်ရန်ဖြစ်ပါသည်ဘာလဲ, ဘူဒါပက်ဖို့ညု. ဒါဟာငလျင်ဗဟိုချက်မှာဖြစ်ပါသည်, မှရွှေ့ပြောင်းဒေသခရီးသွားဧည့်, သူတို့ကစောငျ့ရှောကျဘယ်မှာ နာမည်ကျော်ဆွဲဆောင်မှု and capture the memories.
တစ်ဦးက Seine Cruise နဲ့တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်!
ငါတို့သည်သင်တို့စာသားကမ်းလှမ်း Seine cruises ့အကြောင်းကိုတစုံတယောက်သောသူသည်ရှေးခယျြနိုငျနှငျ့သငျစိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေထင်! သငျသညျပဲရစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာမြို့. သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကျယ်ပြန့်အထိဖြစ်ပါတယ်. သင်အချိန်ကန့်သတ်ခဲ့ကြပါလျှင်, cruises အဲဒီမှာသင့်ရဲ့တိုတောင်းသောအချိန်သို့ fit မှရရှိနိုင်ပါသည်. တစ်ဦးထက်ပိုပြန်တင်ကြ၏ Vibe များအတွက်, တစ်ဦး Seine ညစာခရုဇ်ကိုခံစား, အဆိုပါ Eiffel မျှော်စင်နှင့် Louvre ပြတိုက်အပေါ်သို့ကြည့်, သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့ရွက်လွှင့်အဖြစ်. သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးသီးသန့် combo ဤဆွဲဆောင်မှုနှင့်ခရုဇ်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်, ဒုတိယထပ်မှတက်, အမြင်များအရမ်းလေးစားမိပါတယ်, ပြီးတော့ တစ်လှေခရီးစဉ်ယူ, ခံစားညစာနှင့်တစ်ဦး စပျစ်ရည်ဖန်. သင်တို့သည်ဤမျှဖန်စီလျှင်သင်ပင် Moulin Rouge ပြပွဲအတွက်ယူနိုင်ပါသည်? အစစ်အမှန်ပဲရစ်ကြည့်ရှုရန်, တစ်ဦး Seine ခရုဇ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်.
ဥရောပမြစ်ချောင်းများသည်ပြီးခဲ့သည့် Pick – ဒတ်ခ်ျ Waterways
အရှည်: 528 မိုင် / 850ကီလိုမီတာ
ခရီးစဉ်: နယ်သာလန် မြောက်ပင်လယ်မှ
အဆိုပါအသေးစားမြစ်များ, တူးမြောင်းနှင့်နယ်သာလန်၏ကုန်းတွင်းပိုင်းပင်လယ်အလယ်ဒတျချြ Waterways တက်အောင်, ဒီမှာဒီလိုမြင်ကွင်းဥရောပနှင့်သူမ၏သပိတ်မှောက်နိမ့်နိုင်ငံများကလေ့လာစူးစမ်းဖို့အပန်းဖြေနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. အမ်စတာဒမ်နှင့်ရိုတာဒမ်၏မြို့ကြီးများတဝိုက်လေ့လာရေးခရီးမကြာခဏခရီးစဉ်ပေါ်တွင်ပေါ်လာ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦး၏မီးမောင်းထိုးပြ ဒတ်ခ်ျ Waterways မြစ်ခရုဇ် ၏စီးရီးဖြစ်ပါတယ် 19 Kinderdijk ၏ဒေသမှာရှိတဲ့တူးမြောင်းဘဏ်များတန်းစီနေစစ်မှန်လေရဟတ်. Get your cameras ready.
Keukenhof မှာပန်း display ကိုအညီအမျှအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်, အကြီးဆုံးပန်းပွင့်ဥယျာဉ်တော်. အရောင်ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ကော်ဇောခုနစ်သန်း tulips အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေကြတယ်, ဧပြီလနှင့်မေလအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ခမ်းနားအကောင်းဆုံးမှာ - daffodils နှင့်အခြား Bloom. အထူးသဒတျချြမီးသီးလယ်ကွင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နှစ်စဉ်ဒီအချိန်မှာတိုတောင်း cruises ထွက်သည်ကိုကြည့်ရှု.
အားလုံးပေါ်တွင်! နှင့်သင်၏မြစ်ခရီးစဉ်မှလက်မှတ်လေ့ကျင့်ကြောင်းစာအုပ် တစ်ဦးကရထား Save ယနေ့နှင့်ဒီလိုမြင်ကွင်းတွေ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 Explore ရန်ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်မြစ်ချောင်းများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-rivers-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
မီးရထားခရီးသွားလာ, မီးရထားခရီးသွားလာသြစတြီးယား, မီးရထားခရီးသွားလာဗြိတိန်နိုင်ငံ, မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ်, မီးရထားခရီးသွားလာဂျာမဏီ, မီးရထားခရီးသွားလာအီတလီ, ဥရောပခရီးသွား, ဥရောပ၌ယောဂ
မီးရထားခရီးသွားလာ, မီးရထားခရီးသွားလာဂျာမဏီ, ဥရောပခရီးသွား
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 ဇူလိုင် 2020သြဂုတ် 2020စက်တင်ဘာ 2020အောက်တိုဘာ 2020နိုဝင်ဘာ 2020ဒီဇင်ဘာ 2020ဇန်နဝါရီ 2021ဖေဖော်ဝါရီ 2021မတ်လ 202121ပြီ ၂၀၂၁မေလ 2021ဇွန် 2021
ထိပ်တန်း6ခရီးသွားရန်ဥရောပ၌အိပ်ပျော်နေသောရထား
အစပြုသူများအတွက် Ultimate Europe Train Trip